Montenegro နှင့် Golden Visa အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
ကျွန်ုပ်တို့သည်မွန်တီနီဂရိုးတွင်စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
အကောင်းဆုံး မွန်တီနီဂရိုးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူသူများ နှင့်ရှေ့နေများ Montenegro တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစား Montenegro ရှိနိုင်ငံသားအစီအစဉ်သည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
မွန်တီနီဂရိုးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်မွန်တီနီဂရိုးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ မွန်တီနီဂရိုးရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနိုင်ငံသား၊ မွန်တီနီဂရိုးရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ မွန်တီနီဂရိုးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယနိုင်ငံသား၊ မွန်တီနီဂရိုးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ , မွန်တီနီဂရိုးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အမြဲတမ်းနိုင်ငံသား၊ မွန်တီနီဂရိုးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ယာယီနိုင်ငံသား၊ မွန်တီနီဂရိုးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ မွန်တီနီဂရိုးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ မွန်တီနီဂရိုးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု၊ မွန်တီနီဂရိုးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်မှု၊ Montenegro တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ Montenegro တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် dual Residency၊ Montenegro တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ Montenegro တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ Montenegro ရှိစီးပွားရေး Residency အစီအစဉ်များ၊ Montenegro တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်မှ Residency၊ Montenegro ရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ Montenegro တွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ Montenegro မှဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ Montenegro တွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ Montenegro တွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ Montenegro တွင်နေထိုင်ခွင့်နှင့်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ Montenegro ရှိသံတမန်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ Montenegro တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ Montenegro ရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ Montenegro မှနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ Montenegro မှနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ Montenegro ရှိရွှေဗီဇာ၊ Montenegro ရှိရွှေဗီဇာ၊ Montenegro ရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ၊ Montenegro ရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ Montenegro ရှိဒုတိယဗီဇာအစီအစဉ်၊ မွန်တီနီဂရိုးတွင်ရွှေဗီဇာ၊ နိုင်ငံသားနှင့် Montenegro ရှိရွှေဗီဇာ၊ မွန်တီနီဂရိုးတွင်နေထိုင်ခွင့်နှင့်ရွှေဗီ၊ Montenegro ရှိရွှေဗီဇာ၊ မွန်တီနီဂရိုးရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်, မွန်တီနီဂရိုးရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
မွန်တီနီဂရိုးတွင်နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်“ ၁ ချက်ဖြေရှင်းချက်” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက် Montenegro တွင်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု: EUR 250,000
အတွက်အပိုဆောင်းအခကြေးငွေများ အတွက်ရွှေဗီဇာ မွန်တီနီဂရိုး
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နိုင်ငံသားအဖြစ် မွန်တီနီဂရိုးများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကသည် နှင့် နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ မွန်တီနီဂရိုးများအတွက် မွန်တီနီဂရိုးမှဖောက်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံမှမွန်တီနီဂရိုးမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ မွန်တီနီဂရိုးမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည် Montenegro မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ် Montenegro မှ Golden Visa သို့မဟုတ် Montenegro မှဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြောင့်နေထိုင်ခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လိုပါကအပြည့်အဝဖြေရှင်းနိုင်သည်။ မွန်တီနီဂရိုးသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ မွန်တီနီဂရိုးရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်ငွေရေးကြေးရေးစီမံကိန်းနှင့်အခြားများစွာပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ဆောင်မှုများအားဖြင့်နိုင်ငံသား ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်မှတဆင့်မွန်တီနီဂရိုးအဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ မွန်တီနီဂရိုးအတွက်, မွန်တီနီဂရိုးအတွက်တတ်နိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့ရပျ, မွန်တီနီဂရိုးများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကတတ်နိုင်နိုင်ငံသားအဖြစ်, မွန်တီနီဂရိုးများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများနှင့်တတ်နိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီမှတတ်နိုင်နိုင်ငံသားအဖြစ်
နိုင်ငံသား ၃၇ နိုင်ငံသို့မွန်တီနီဂရိုးမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ Montenegro ရှိရွှေဗီဇာ။
မွန်တီနီဂရိုးမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
မွန်တီနီဂရိုးမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့မွန်တီနီဂရိုးရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
မွန်တီနီဂရိုးမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
မွန်တီနီဂရိုးမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
မွန်တီနီဂရိုးမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုသို့စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
Montenegro တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်သူတို့နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ပြုလုပ်ထားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှထွက်ခွာလိုပါက Montenegro တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှအမြတ်အစွန်းကောင်းမွန်သော ၀ င်ငွေရရှိသင့်သည်ဟူသောအမြင်ဖြင့် Montenegro ရှိအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးသည်။ မွန်တီနီဂရိုးရှိအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီအနည်းငယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အဆင်ပြေစွာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးရှိပြီးကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီး Montenegro ရှိကောင်းသောနေရာများမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Montenegro ရှိအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်အတူ Montenegro အတွက်အကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေနေထိုင်မှုအစီအစဉ်များ။
သိရန်လိုအပ်သည် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Montenegro နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
မွန်တီနီဂရိုးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေရှေ့နေကနိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်မွန်တီနီဂရိုးသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏အောင်မြင်သောနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ Montenegro သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်အကြံပြုချက်များကို အခြေခံ၍ မွန်တီနီဂရိုးမှသို့မဟုတ်မွန်တီနီဂရိုးသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်လိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Montenegro ၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုလက်ခံရရှိရန်နှင့်ငြင်းဆန်ခြင်း၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက် Montenegro အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအားဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုအကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံစာကိုပြင်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကန ဦး Due Diligence ကိုလုပ်ဆောင်သည်။
မွန်တီနီဂရိုးအတွက်လုံ့လဝီရိယရှိသောအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
မွန်တီနီဂရိုးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုရှေ့ဆက်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာ client နှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကို scan ဖတ်မိလိမ့်မည်။
Montenegro ရှိအောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား Montenegro ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် မွန်တီနီဂရိုးများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက မွန်တီနီဂရိုးမှသို့မဟုတ်လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်ကုန်သည်များသို့ရောင်းချသူများအားကမ်းလှမ်းခြင်းမပြုပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် မွန်တီနီဂရိုးများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များအားဖွငျ့ဖွစျသညျ Montenegro တွင်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ် Montenegro မှသို့မဟုတ်သို့မဟုတ်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်၏စက်မှုလုပ်ငန်းထောက်လှမ်းရေးအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် မွန်တီနီဂရိုးများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံအားဖွငျ့ဖွစျသညျ မွန်တီနီဂရိုးတွင်တရားမ ၀ င်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် မွန်တီနီဂရိုးများအတွက် Montenegro ရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် မွန်တီနီဂရိုးများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက မွန်တီနီဂရိုးရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် မွန်တီနီဂရိုးအတွက်အထောက်အပံ့သည်မွန်တီနီဂရိုးအတွက်ကုန်သွယ်ခြင်း၊ မွန်တီနီဂရိုးတွင်သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းအတွက်တစ် ဦး ချင်းအတွက်မရနိုင်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် မွန်တီနီဂရိုးများအတွက် တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု မွန်တီနီဂရိုးများအတွက် မွန်တီနီဂရိုးရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက မွန်တီနီဂရိုး Montenegro ရှိညစ်ညမ်းစာပေများကိုရောင်းဝယ်သူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသား မွန်တီနီဂရိုးအတွက်ရှေ့ရပျ မွန်တီနီဂရိုးရှိမူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာပစ္စည်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိုမထောက်ပံ့ပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်မွန်တီနီဂရိုးနှင့်၎င်းတို့၏ KYC အတွက်ဖောက်သည်များအတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုသေချာစေရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်း၊ လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုရန်အတွက်မွန်တီနီဂရိုးအာဏာပိုင်များမှငြင်းပယ်မှုအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမှကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ နိုင်ငံသားအဖြစ် မွန်တီနီဂရိုးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံနှင့်မွန်တီနီဂရိုး၏တရား ၀ င်လိုအပ်ချက်များကြောင့်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုပြုလုပ်သည်။
မွန်တီနီဂရိုးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်မွန်တီနီဂရိုးအတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်သောနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးကိုပေးသည်။
နှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံများကို Montenegro သို့ဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများကို Montenegro အတွက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
မွန်တီနီဂရိုးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများမှအတွေ့အကြုံရှိသောနိုင်ငံသားနှင့်မွန်တီနီဂရိုးအတွက်တရား ၀ င်ကိုယ်စားလှယ်များသည်ဖောက်သည်များအားပံ့ပိုးမှုပေးသည်။
သင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုမွန်တီနီဂရိုးမတိုင်မီနှင့်ခွင့်ပြုချက်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်မွန်တီနီဂရိုးကိုစီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရပံ့ပိုးမှုအတွက်ထိုနေရာတွင်ရှိနေလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုတွင် Montenegro အပါအ ၀ င်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ကူညီပေးနေသည်။
အကယ်၍ မွန်တီနီဂရိုးသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကို Montenegro သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တွက်ချက်ပါ
မွန်တီနီဂရိုးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ချက်ရန်မိသားစု ၀ င်များနှင့် ၄ င်းတို့၏အသက်အပါအဝင်အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုဖြည့်စွက်ပါ။ မွန်တီနီဂရိုးအတွက်ဖောက်သည်အမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ မွန်တီနီဂရိုးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အရနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကုန်ကျငွေနှင့်အခြားစရိတ်များပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ မွန်တီနီဂရိုးများအတွက်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်မွန်တီနီဂရိုးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုစာရင်းပြုစုထားသည်။
သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူမွန်တီနီဂရိုးသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်မွန်တီနီဂရိုးအတွက်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေဖြင့်၊ မွန်တီနီဂရိုးတွင်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်မည်သည့်အချိန်တွင်လိုအပ်မည်နည်းနှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းအပြင်မွန်တီနီဂရိုးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မွန်တီနီဂရိုးတွင်လည်းစီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ ၎င်းကိုမွန်တီနီဂရိုးအတွက်အခြားအတိုင်ပင်ခံများမှပေးသောကျွန်ုပ်တို့အားမွန်တီနီဂရိုးနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်တစ်နေရာတည်းဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
မွန်တီနီဂရိုး၏မိသားစုများ၊ တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့် Montenegro ရှိနိုင်ငံတကာနှင့် Montenegro တို့၏အကူအညီဖြင့် Montenegro အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုကျော်လွန်သောနည်းလမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ Montenegro တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ (သို့) Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (Montenegro တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပိုမိုသက်သာသည်။ )
မွန်တီနီဂရိုးသို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချမည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် မွန်တီနီဂရိုးအတွက်ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့် မွန်တီနီဂရိုးရှိကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်းနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Incase သင်အဘို့, မွန်တီနီဂရိုးအတွက်တိုင်ပင်လိုအပ်ပါတယ် မွန်တီနီဂရိုးအတွက်ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် Montenegro ရှိရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် သင်အစီအစဉ်ဆွဲမယ်ဆိုရင်မွန်တီနီဂရိုး Montenegro ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ၀ ယ်ခြင်းအားဖြင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန် မွန်တီနီဂရိုးအတွက်ချက်ချင်းစတင်ဘို့။
Montenegro ရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ Montenegro ရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် မွန်တီနီဂရိုး၌နေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
Montenegro အတွက် virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
Montenegro အတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ မွန်တီနီဂရိုးများအတွက်ကို virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းကိုင်, Montenegro အတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
မွန်တီနီဂရိုးရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးနောက် Montenegro သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း မွန်တီနီဂရိုး.
မွန်တီနီဂရိုးတွင် Web Design
မွန်တီနီဂရိုးတွင် web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
Montenegro ရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
မွန်တီနီဂရိုးအတွက် App Development
Montenegro ရှိ SEO
ကျွန်ုပ်တို့သည်မွန်တီနီဂရိုးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအဖြေများအားဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ မွန်တီနီဂရိုးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်၊ မွန်တီနီဂရိုးအတွက်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်မွန်တီနီဂရိုးတွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များရှိပြီး၊ မွန်တီနီဂရိုးအတွက်အကောင်းဆုံးဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုအတွေ့အကြုံများပေးအပ်သည့်ဂုဏ်သတင်းရှိသည် မွန်တီနီဂရိုးတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုများ။ Montenegro အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်လိုင်း၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်မွန်တီနီဂရိုးတွင်နေထိုင်ခွင့်ပါမစ်ရှိသည်၊
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ မွန်တီနီဂရိုးအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ပါကမွန်တီနီဂရိုး၏နယ်မြေတွင်အသုံးပြုရန်သင်၏ရှေ့နေအားတရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်အက်ပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ်တရား ၀ င်ဖြစ်စေမွန်တီနီဂရိုးကောင်စစ်ဝန်ရုံးမှပြုလုပ်သင့်သည်။
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - မွန်တီနီဂရိုးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
Montenegro သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းကို Montenegro ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတစ်ဆင့်စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်ဖြင့် Montenegro ၏နေထိုင်ခွင့်ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ Montenegro တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း၊ Montenegro အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း။ မွန်တီနီဂရိုးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ မွန်တီနီဂရိုးရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏အကောင်းဆုံးနေထိုင်မှု၊ မွန်တီနီဂရိုးရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများနှင့်အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်းအားဖြင့်မွန်တီနီဂရိုးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်း၊ မွန်တီနီဂရိုးရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှထောက်ပံ့ခြင်း မွန်တီနီဂရိုး၌။
မွန်တီနီဂရိုးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့် Montenegro ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခြင်း Montenegro ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏နေထိုင်မှု မွန်တီနီဂရိုးရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများမှနေထိုင်ခွင့် | မွန်တီနီဂရိုးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများ၏နေထိုင်မှု
Montenegro သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကို Montenegro ၏စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့် Montenegro ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတစ်ဆင့် Montenegro ၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ မွန်တီနီဂရိုးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ မွန်တီနီဂရိုးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအထောက်အပံ့ပေးသောမွန်တီနီဂရိုးအတွက်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ မွန်တီနီဂရိုးရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ မွန်တီနီဂရိုးရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများမှအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားနှင့်အကောင်းဆုံးမွန်တီနီဂရိုးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများမှလျှောက်ထားခြင်း Montenegro ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များ၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့် Montenegro ရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများ။
မွန်တီနီဂရိုးအတွက်စျေးသက်သာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ Montenegro ရှိလူကြိုက်များသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ မွန်တီနီဂရိုးရှိစျေးသက်သာသည့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာရှေ့နေများ မွန်တီနီဂရိုးရှိစျေးချိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ မွန်တီနီဂရိုးအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံ | မွန်တီနီဂရိုးအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
မွန်တီနီဂရိုး၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုမွန်တီနီဂရိုး၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အိမ်ခြံမြေ၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်တို့ဖြင့်တရားဝင်နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းစသည်တို့ကိုအနက်ဖွင့်နိုင်သည်။ မွန်တီနီဂရိုးတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားပါ၊ မွန်တီနီဂရိုးအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ မွန်တီနီဂရိုးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ မွန်တီနီဂရိုးတွင်အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများနှင့်မွန်တီနီဂရိုးအတွက်အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အကြံပေးများ၊ မွန်တီနီဂရိုးတွင်အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတဆင့်။
မွန်တီနီဂရိုးအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှု မွန်တီနီဂရိုးရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ မွန်တီနီဂရိုးရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ မွန်တီနီဂရိုးရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ မွန်တီနီဂရိုးအတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံ
Montenegro ရှိရွှေဗီဇာအားအစိုးရမှငွေချေးစာချုပ်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အိမ်ခြံမြေများစသဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့် Montenegro ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် Montenegro ၏နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ အနက် Montenegro သို့ရွှေဗီဇာလျှောက်ထားသည်။ Montenegro မှထောက်ပံ့သောရွှေဗီဇာအစီအစဉ်။ မွန်တီနီဂရိုးအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ မွန်တီနီဂရိုးရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်မွန်တီနီဂရိုးအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများ၊ မွန်တီနီဂရိုးတွင်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့် Montenegro ရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတဆင့်။
မွန်တီနီဂရိုးအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | Montenegro ရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ Montenegro ရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ Montenegro ရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ မွန်တီနီဂရိုးအတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
မွန်တီနီဂရိုး၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာယူရို ၂၅၀,၀၀၀ ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်မွန်တီနီဂရိုးသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုမွန်တီနီဂရိုးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်မြင့်မားသောအမြတ်အစွန်းတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ပေးသည်။ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်မွန်တီနီဂရိုးသို့နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုသာပေးပြီး၊
Montenegro သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ် Montenegro သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဗီဇာဖြင့်မည်သည့်နိုင်ငံသားများသည်နိုင်ငံသားဖြစ်ရန်လျှောက်ထားနိုင်ပါသလဲ။
နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုအာရှမှ Montenegro သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း၊ နိုင်ငံမှအာဖရိကမှ Montenegro သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ နိုင်ငံမှနိုင်ငံသား၊ ဥရောပမှ Montenegro သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ နိုင်ငံသား၊ South America မှ Montenegro သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ မလေးရှားမှ Montenegro သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှ Montenegro သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အင်ဒိုနီးရှားမှ Montenegro မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ သီရိလင်္ကာမှ Montenegro သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ နီပေါမှ Montenegro သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အိန္ဒိယမှ Montenegro သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား။ ယူအေအီးမှ Montenegro သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
Montenegro ၏ပြည်နယ်စာရင်းစစ် Institution မှ
ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ၀ န်ကြီးဌာန
ပြည်သူ့အခွန် ဦး စီးဌာန
အမေရိကန်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာန - ဗဟိုနှင့်အရှေ့ဥရောပစီးပွားရေးသတင်းအချက်အလက်စင်တာ
အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဦး စီးဌာန
link ကိုမှ မွန်တီနီဂရိုး၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန Montenegro ရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်ရေးအတွက်မူဝါဒချမှတ်ရန်တာဝန်ရှိ